Pips နှင့် Profits တွေ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်Pips နှင့် Profits တွေ
တစ်ဦးက Pip ဆိုတာဘာလဲ
"ငါယနေ့ခုံတန်းလျား 150 ပေါင်ဖိ။ "
သငျသညျ Forex သို့များမှာအခါ, စွမ်းဆောင်ရည်၏ဘုံပြောပြလိုပါသည် pips ဖြစ်ပါသည်:
"ငါသည်ငါ၏နောက်ဆုံးကုန်သွယ်မှုအတွက် 150 pips အမြတ်အစွန်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏" or "ဒီနေ့ကုန်သွယ်မှုရပ်တန့်သွားပြီး 85 pips တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ "
ok, ဒါကြောင့်တစ်ဦး PIP ကဘာလဲ?
PIP “ အချက်၏ရာခိုင်နှုန်း” သို့မဟုတ်“ စျေးနှုန်းအတိုးနှုန်း” အတွက်တိုသည်၊ ၎င်းသည်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည့်အသေးငယ်ဆုံးထပ်တိုးစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဒinမကိန်း ငွေလဲနှုန်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးအားလုံး။ စကားစပ်ပေါ် မူတည်. ဒီ / ပုံမှန် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏အမှု၌တဦးတည်းအခြေခံအချက် 0.0001, GBD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါသည်CHF နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် .01 ။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး 4-ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ် ပှဲစား ဥပမာအား:
မှတ်ချက်:4ဂဏန်းပွဲစားများနှင့်အတူ, ဒီနောက်ဆုံးဒဿမအမှတ်ယန်းအခြေစိုက်ငွေကြေးအားလုံးအတှကျအမြားဆုံးငွေကြေးအားလုံးအတှကျ 0.0001 နှင့် 0.01 ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန့်ပွားဒီအပေါ်2pips (1.3504-1.3502 = 2) ဖြစ်ပါသည် ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစျေးကွက်များ သရုပ်ပြ။ 1.3502 မှ 1.3503 ထံမှ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာရွေ့လျားပါက ONE PIP ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပေသည်။
EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာတွင်ကုန်သွယ်ရေးနမူနာ:
entry 1.3505 မှာ Long က EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ထွက်ပေါက် 1.3525 မှာအနီးကပ် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အမြတ်အစွန်း / ပျောက်ဆုံးခြင်း + 20 Pips
သငျသညျ 1.3505 မှာ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ် 1.3525 မှာရောင်းချလျှင်, သင် 20 pips ရာ၌ခန့်ထားပြီလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY တွင်ကုန်သွယ်ရေးနမူနာ:
entry 88.95 မှာက Short အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY
ထွက်ပေါက် 89.25 မှာအနီးကပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY
အမြတ်အစွန်း / ပျောက်ဆုံးခြင်း -30 Pips
သငျသညျ 88.95 မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY ရောင်း 89.25 မှာမထွက်လျှင်, သင် -30 pips ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး 5-ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ် ပှဲစား ဥပမာအား:
5 ဂဏန်းပွဲစားများ (စဒဿမကိန်းစျေးနှုန်းပွဲစားကိုခေါ်) နဲ့, နောက်ဆုံးဒဿမအမှတ်ယန်းအခြေစိုက်ငွေကြေးအဘို့အ 0.00001, ဒါမှမဟုတ် 0.001 ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး PIP တစ်အစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဥပမာ, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့ဒီ Alpari ဗြိတိန်သရုပ်ပြအပေါ် 0.9 pips (1.34995-1.34986) ဖြစ်ပါသည်။ 1.34986 မှ 1.34996 ထံမှ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာရွေ့လျားပါက 1 PIP ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပေသည်။
GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာတွင်ကုန်သွယ်ရေးနမူနာ:
entry 1.55508 မှာ Long က GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ထွက်ပေါက် 1.56791 မှာအနီးကပ် GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အမြတ်အစွန်း / ပျောက်ဆုံးခြင်း + 128.30 Pips
သငျသညျ 1.55508 မှာ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်ယူခြင်းနှင့် 1.56791 မှာရောင်းချခဲ့လျှင်သင် 128.30 pips (1.56791-1.55508 = 128.30) လုပ်ပါလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပိုဂဏန်း၏, တကဂဏန်းတွက်စက်၏အကူအညီမပါဘဲတစ်ဦးအတိအကျ PIP ပျံ့နှံ့သို့မဟုတ် PIP အမြတ် eyeball ဖို့ခက်သည်။ သို့သော် 5-ဂဏန်းပွဲစား၏ဤကျြဆနျပြဿနာကသူတို့4ဂဏန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အနိမ့်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်, ဆိုလိုသည်မှာ, ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့န်၏ပိုကြီးတဲ့အားသာချက်ပေးရခြင်းဖြစ်သည် ပှဲစား counterparts တွေကို။
ကျနော်တို့ PIP တန်ဖိုး (အော်တိုနဲ့ကို manual) ၏တွက်ချက်မှုအတွက်မြင်ရကြလတံ့အဖြစ်သူတို့က, Forex ကုန်သွယ်အတွက်ဒေါ်လာအမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးတွက်ချက်များအတွက်အခြေခံကြောင့် pips ဒါအရေးကြီးလှသည်အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက Pip ထိုအကို tick Size ကိုထိုအကို tick အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
Forex ထဲမှာ, ကို tick အရွယ်အစား နှင့် PIP နီးပါးပြောရလျှင်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့မြင်ကြပြီအဖြစ်, PIP ငွေကြေး၏အသေးဆုံး incremental စျေးနှုန်းအပြောင်းအရွေ့သည်။ tick အရွယ်အစား စျေးနှုန်းအနိမ့်ဆုံးပြောင်းလဲမှုပါ။ အနာဂတ်အနာဂတ်လိုပဲ စျေးနှုန်းရွှေ့နိုင်သောနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှငွေပမာဏ ထို့အပြင်စျေးကွက်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် ကို tick အရွယ်အစား။4ဂဏန်းပွဲစားနှင့်တကွ, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးနှုန်း 0.0001 မှရွှေ့နိုငျသောအသေးငယ်ဆုံး increment 1.3840 အထိသို့မဟုတ် 1.3841 မှဆငျးသကျဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုသော, 1.3839 တစ်ဦးကို tick အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ အဆိုပါ EUR အနာဂတ်ဈေးကွက်လည်း 0.0001 တစ်ဦးကို tick အရွယ်အစားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်တစ်စာချုပ်၏ကို tick အရွယ်အစားတိုင်း 12.50 များအတွက်စျေးနှုန်းတက်လှုံ့ဆျောသို့မဟုတ်လှဲချကြောင်းကိုအဓိပ်ပာယျ, $ 0.0001 တစ် fixed ကို tick တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်ကြောင်း၏အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံး ကုန်သွယ်ရေး $ 12.50 အားဖြင့်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းလိမ့်မယ်။ ဆနျ့ကငျြ, Forex စွမ်း၏ကို tick အရွယ်အစား (PIP ၏ PIP သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်း) ကတစ်ဒေါ်လာတန်ဖိုး fixed မသည်, အစား (အဘို့ကုန်သွယ်ထိုယူနစ်မှဆွေမျိုးတွက်ချက်သည် တိုက်ရိုက်နှုန်း), နှင့်လည်းငွေလဲနှုန်းနှင့်စခန်းငွေကြေးကိုးကား (အဘို့ရန် သွယ်ဝိုက်နှုန်း နှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်နှုန်း).
ကိုယ်တိုင် Pip Value ကိုထိုအအကျိုးအမြတ် / ပျောက်ဆုံးခြင်း calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
ဒေါ်လာစျေး PIP တန်ဖိုးကို၏တွက်ချက်မှုအနေဖြင့်ပွုသောစိတျထဲမှာသည်းခံပါ ပှဲစား အလိုအလျှောက်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက်, ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်အသုံးဝင်သည်။
အမြတ်အစွန်း / ဆုံးရှုံးမှု၏တွက်ချက်မှုငွေကြေးနှုန်းမှာအမျိုးအစားများပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်ကို၎င်း, ထိုသုံးယောက်ရှိပါတယ်:
တိုက်ရိုက်နှုန်း EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
သွယ်ဝိုက်နှုန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY အမည်, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD
လက်ဝါးကပ်တိုင်နှုန်း EUR / JPY အမည်, GBP / JPY အမည်, AUD / JPY အမည်, EUR / CHF, EUR / GBP
အသီးအသီးစုံတွဲ၏ PIP တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်နှင့်ဒေါ်လာအတွင်းအမြတ်အစွန်းနဲ့အရှုံးရရှိဖို့ PIP လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူကများပြားတဲ့လမ်းရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် pip တန်ဖိုးတွက်ချက်မှုများကိုမပြုလုပ်လိုပါကလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည် ညွှန်ပြချက် ကအားလုံးတစ်မျိုး၏ (/ ရောင်းလဲလှယ်မှုနှုန်းဝယ်လေလံအတူပြန့်ပွား) ကို PIP တန်ဖိုးကိုပြသပေးပါတယ်။
ဤ ညွှန်ပြချက် သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်ကကမ်းလှမ်းအားလုံးငွေကြေးအားလုံးအတှကျအောက်ပါအချက်အလက်များခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မယ်:
သင်္ကေတ (က = AUD, C ကို = CAD, E = EUR, F ကို = CHF, G = GBP, J ကို = JPY အမည်, N က = NZD, ဦး = အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ယနေ့အထိ Daily သတင်းစာအကွာအဝေး: Ave နေ့စဉ်အကွာအဝေး (ADR တစ်% အဖြစ် DR)
ပြန့်ပွား (ADR တစ်% အဖြစ်ပြန့်ပွား)
(ကုန်သွယ်အပြည့်အဝတွေအများကြီးနှုန်း) PIP နှုန်းဒေါ်လာ
လဲလှယ်ရေးပေးဆောင် (+) သို့မဟုတ်တရားစွဲဆို (-) က ပှဲစား ရှည်လျားတိုတောင်းသောရာထူးအပေါ်
ဒီနေရာလေးကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကရုပ်ပုံ ညွှန်ပြချက် အမှအသုံးချ AUDUSD FXPro ၏ဇယားဤကဲ့သို့သောကြည့်:
PIP တန်ဖိုးကိုနှုန်းဒေါ်လာစျေးနောက်ဆုံးကော်လံကနေတတိယအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ UJ or USDJPY 12.44 (ထိုပိုကြီးသူမြား၏တဦးတည်း) ၏တစ်ဦး PIP တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်, နှင့် AN သို့မဟုတ် AUDNZD 7.65 (အသေးငယ်သူမြား၏တဦးတည်း) ၏တစ်ဦး PIP တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။ အကိုသတိပွု AUDNZD $ 20 (4 pips - အဖြစ်မကြာမီသင်တစ်ဦး 28.9K တွေအများကြီးနှင့်အတူဤစုံတွဲကိုတာရှည်သွား, သငျသညျဆငျးသကျပါလိမ့်မယ်: ပျံ့နှံ့ပျှမ်းမျှနေ့စဉ်အကွာအဝေးတစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 100% သော 153 pips (နောက်ဆုံးကော်လံကနေ 20th) မှာအကြီးဆုံးတခုလည်းဖြစ်ပါတယ် X ကို 7.65) ။ မကောင်းဘူး။ ကျေးဇူးတင်စရာအများစုကစွမ်း5pips ထက်လျော့နည်းနေတဲ့ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် 10 နီးစပ်သူတစ်ဦး PIP တန်ဖိုးကိုရှိသည်။ ရှည်လျားအီးယူ Going သို့မဟုတ် EURUSD သာ 1.8 pips (ADR ၏ 2.8%) ၏တစ်ပြန့်ပွားကုန်ကျမှုများကိုကာကွယ်မယ်လို့နှင့် $ 10 တစ်ဦး PIP တန်ဖိုးကိုမှာ, သင်က 18K တွေအများကြီးအပေါ်သာ $ 100 ချပါလိမ့်မယ်။ ဒီကုန်သွယ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကနေသာရှိပြီးကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် AUDNZD.
အောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောတွက်ချက်မှုမှတဆင့် PIP တန်ဖိုးများနှင့် PIP လှုပ်ရှားမှုများကိုတွက်ချက်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
တိုက်ရိုက်နှုန်းထားများအအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကိုးကားငွေကြေးသည်အဘယ်မှာရှိငွေကြေးကိုစွမ်း (ဒုတိယငွေကြေးဆိုလိုသည်မှာ XXX က / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုးကားလျှက်) ဖြစ်ကြသည်။ ဘုံအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေး (ပထမငွေကြေးကိုးကား) ဒဿနိကဗေဒ EUR, GBP, AUD နှင့် NZD ပါဝင်သည်။
အောက်တွင် $ ဒေါ်လာအတွက် Pips အတွက် Pip Value တစ်ခု, အမြတ် / ပျောက်ဆုံးခြင်း (P / L) ကိုရရှိဖို့ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်တစ်စားပွဲ, နှင့် P / L ကိုဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာ: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 200,000 စာချုပ်
1.4204 မှာဝယ် 1.4378 ရောင်း
Value ကို PIP အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား 200,000 (အများကြီးအရွယ်အစား) * 0.0001 (ကို tick အရွယ်အစား) = $ 20.00
Pips အတွက်: P / L ကို ရောင်းရန်စျေး - ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း 1.4378 (ရောင်းဈေး) - 1.4204 (၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း) = .0174 အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြားနားချက် = 174 ကအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။
$ ဒေါ်လာအတွက်: P / L ကို PIP အမြတ် (အရှုံး) * Pip Value တစ်ခု 174 (PIP အမြတ်အစွန်း) * $ 20 (PIP တန်ဖိုး) = $ 3480 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
တိုက်ရိုက်နှုန်းထားများသည်ပိုက်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးပုံသေနည်းဖြစ်သည် (lot size * tick size) ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် pip တန်ဖိုးသည်လက်ရှိနှုန်းနှင့်ကွဲပြားခြင်းမရှိသောကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းနှစ်ခုဖော်မြူလာများအတိုင်းတိုက်ရိုက်နှုန်းနှင့်အတွဲတစ်ခုစီ၏စျေးနှုန်းအတက်အကျကြားတွင်တူညီသောတန်ဖိုးရှိနေသည်။ micro lot (1000 ယူနစ်) ၏ pip တန်ဖိုးသည် $ 0.1 (10 ဆင့်)၊ သေးငယ်သော lot ၏ pip တန်ဖိုး (10,000 ယူနစ်) သည် $ 1 ဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်တန်ဖိုးတစ်ခု၏ pip တန်ဖိုးသည်အစဉ်မှတ်မိနေနိုင်သည်။ 100,000 ယူနစ်များမှာ $ 10 ဖြစ်သည်။
သွယ်ဝိုက်နှုန်းထားများသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သွယ်ဝိုက်ရောင်းဝယ်သောထိုငွေကြေးများဖြစ်သည်။ ဥပမာ USD / CAD ဖြင့် USD သည်“ အခြေခံငွေကြေး” ဖြစ်သည် CAD “ quote ငွေကြေး” ဖြစ်ပြီး၊ နှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာလျှင်ယူနစ်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ/CAD 0.9874 မှာကုန်သွယ် 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာ = 0.9874 ဆိုလိုသည်။
ဥပမာ: အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY 100,000 စာချုပ်
82.12 မှာရောင်း 81.34 မှာဝယ်ခြင်း
Value ကို PIP အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား / လက်ရှိနှုန်းသည် 100,000 (အများကြီးအရွယ်အစား) * 0.01 (အရွယ်အစားကို tick) / 82.12 (လက်ရှိနှုန်းကို) = $ 12.17
Pips အတွက်: P / L ကို ရောင်းရန်စျေး - ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း 82.12 (ရောင်းဈေး) - 81.34 (၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း) = .78 အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြားနားချက် = 78 pips
$ ဒေါ်လာအတွက်: P / L ကို PIP အမြတ် (အရှုံး) * Pip Value တစ်ခု 78 (PIP အမြတ်အစွန်း) * $ 12.17 (PIP တန်ဖိုး) = $ 949 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
သွယ်ဝိုက်နှုန်းထားများနှင့်တိုက်ရိုက်နှုန်းထားများအကြား PIP တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်အတွက်သာခြားနားချက်လက်ရှိနှုန်း (အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား / ငွေကြေးနှုန်းသည်) နှင့်အတူဌာနခွဲဖြစ်ပါသည်။ ဒီဌာနခွဲရဲ့တိုက်ရိုက်နှုန်းပိုမို fixed မှုနှုန်းကနေဝေးကြာပါတယ်။ ဒါဟာသွယ်ဝိုက်နှုန်းကိုစွမ်းအကြားသူအပေါင်းတို့ကို PIP တန်ဖိုးများကိုကွာခြားအပေါင်းတို့နှင့်တကွထို PIP တန်ဖိုးများသည် dynamically အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသောလက်ရှိနှုန်းဆွေမျိုးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်နှုန်း ထိုအမေရိကန်ဒေါ်လာပါဝင်မငွေကြေးကိုစွမ်းရှိပါတယ်။ အအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကိုးကားအတွက်ကိုယ်စားပြုသည်မဟုတ်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာလုံလောက်, ကကိုးကားတွက်ချက်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှုန်းကိုဥပမာအနေနဲ့ EUR ခြေရင်းငွေကြေးသည်အဘယ်မှာရှိ EUR / CHF သည်နှင့် CHF အကိုးကားငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ: EUR /CHF 100,000 စာချုပ်
1.1500 မှာ 1.1620 မှာမဝယ်နဲ့ရောင်းချ
(1.3890 မှာ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူ)
Value ကို PIP အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား * အခြေစိုက်စခန်းကိုးကား / လက်ရှိနှုန်းသည် 100,000 (အများကြီးအရွယ်အစား) * 0.0001 (အရွယ်အစားကို tick) * 1.3890 (EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအခြေကိုးကား) / 1.1500 (လက်ရှိနှုန်းကို) = $ 12.07
Pips အတွက်: P / L ကို ရောင်းရန်စျေး - ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း 1.1620 (ရောင်းဈေး) - 1.1500 (၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း) = 0.0120 အပြုသဘောဆောင်သောခြားနားချက် = 120 pips
$ ဒေါ်လာအတွက်: P / L ကို PIP အမြတ် (အရှုံး) * Pip Value တစ်ခု 120 (PIP အမြတ်အစွန်း) * $ 12.07 (PIP တန်ဖိုး) = $ 1448 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဒီဖော်မြူလာနှင့်သွယ်ဝိုက်တစ်အကြားကွာခြားချက် PIP တန်ဖိုးကို၏တွက်ချက်မှုအတွက်အထက်ကဒီဥပမာထဲမှာလက်ရှိ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးနှုန်းဖြစ်သည့်အခြေခံကိုးကားနဲ့တစ်ဦးအပိုဆောင်းမျိုးစုံရှိကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ယခင်နှစ်ဦးထက်တွက်ချက်မှုအနည်းငယ်ပိုပါဝင်ပတ်သက်စေသည်။ လက်ရှိနှုန်းနဲ့အတူအခြေစိုက်စခန်းကိုးကားနှင့်ဌာနခွဲနှင့်အတူဤရွေ့ကားအပိုတွက်ချက်မှုလက်ဝါးကပ်တိုင်နှုန်းကိုစွမ်းအကြားသူအပေါင်းတို့ကို PIP တန်ဖိုးများကိုကွာခြားအပေါင်းတို့နှင့်တကွထို PIP တန်ဖိုးများသည် dynamically ကိုယ်တိုင်ကအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသောလက်ရှိနှုန်းဆွေမျိုးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
ဤတွင်အားလုံးအဆိုပါ Formula, ဘေးထွက်အားဖြင့်ဘေးထွက်၏တစ်ဦးကစားပွဲတင်ပြိုကွဲရ Is:
Value ကိုတွက်ချက်မှု PIP
: P / L ကိုတွက်ချက်မှု
အမေရိကန်ဒေါ်လာတွက်ချက်မှုမှ P ကို ​​/ L ကို
တိုက်ရိုက်နှုန်း PIP Value ကို = အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား P / L = ရောင်းဈေး - ၀ ယ်ယူသည့်စျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာအမြတ် = PIP အမြတ် (အရှုံး) * Pip Value တစ်ခု
သွယ်ဝိုက်နှုန်း PIP Value ကို = အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား / လက်ရှိနှုန်းသည် P / L = ရောင်းဈေး - ၀ ယ်ယူသည့်စျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာအမြတ် = PIP အမြတ် (အရှုံး) * အများကြီးအရွယ်အစား * Pip Value တစ်ခု
လက်ဝါးကပ်တိုင်နှုန်း PIP Value ကို = အများကြီးအရွယ်အစား * ကို tick အရွယ်အစား * အခြေစိုက်စခန်းကိုးကား / လက်ရှိနှုန်းသည် P / L = ရောင်းဈေး - ၀ ယ်ယူသည့်စျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာအမြတ် = PIP အမြတ် (အရှုံး) * Pip Value တစ်ခု
ကိုယ်တိုင် Pip Value တစ်ခုနှင့်အမြတ် / ပျောက်ဆုံးခြင်း calculate ကိုလုပ်နည်း
တစ်ဦး Pip ကဘာလဲ